Iimboniselo zehlathi lemvula
Iimboniselo zehlathi lemvula yindawo ebekwe kakuhle, etofotofo kwibhloko ethambekileyo ekumbindi weentaba zeBunya.
Ipaki yesizwe, eyeyesibini indala e-Qld, ineekhilomitha zeendlela zokuhamba, iipayini ezinde ze-bunya, ihlathi elishinyeneyo lomsedare lamandulo kunye neentaka ezininzi kunye nezinye izilwanyana zasendle ezibandakanya i-wallabies, i-possums, i-bandicoots kunye ne-echidnas.
Indawo egqibeleleyo yokuphumla kunye nokunxibelelana nendalo okanye ukonwaba phambi kwendawo yomlilo ngencwadi elungileyo.,
I-chalet inamanqanaba amathathu. Kwinqanaba lokuqala uya kufumana i-carport efihlakeleyo kunye nempahla evaliweyo.Kumgangatho wesibini kukho igumbi lokuphumla, indawo yokutyela, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, amagumbi okulala amabini (ukumkanikazi om-1, nomnye omnye) kunye neveranda enkulu ejonge kwipaki yesizwe entle yeeNtaba zeBunya.Kwinqanaba eliphezulu le-mezzanine ligumbi lokulala likakumkanikazi wesibini kunye ne-mezzanine evulekileyo yeebhedi ezimbini ezingatshatanga.
Iintaba zeBunya zibonelela ngamathuba amaninzi okuhamba emahlathini, ukubukela iintaka, ukujonga iinkwenkwezi kunye nokuphumla.
Ngelixa kukho iivenkile zekofu, indawo yokutyela, ivenkile encinci ngokubanzi, kunye nebha yewhisky ekhoyo, uyacetyiswa ukuba uze nezakho amalungiselelo ukuba unqwenela ukuzenzela ngokwakho.Itotshi, izihlangu ezihamba kakuhle kunye nekhati (nasehlotyeni njengoko ngokuhlwa kunokubanda) kucetyiswa.
Iindwendwe ziya kuba neemfihlo ezipheleleyo, kunye nokuzihlola. Abanini banokuqhagamshelwa ngenkxaso kwaye bacebise ukuba kuyimfuneko